क्रिकेट रंगशालाको डीपीआर बन्यो, धुर्मसले मागे ‘अन्तिम सहयोग’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← द्वन्द्वकालमा यौन हिंसापीडित युवतीको बयान- ‘कुकुरबाट बलात्कार गराइयो’
डोजरले सत्यानाश →
सरकारले १७ वर्षसम्म क्रिकेट मैदान बनाउन सकेन, कहिलेसम्म कुर्ने ?
६ कात्तिक, चितवन । धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा बनाउने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । तोकिएको समयभन्दा झण्डै दुई महिना ढिला गरी रंगशालाको डीपीआर तयार भएको हो । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले भोगचलन गर्दै आएको २० विगाहा ६ कठ्ठा जग्गामा बन्ने क्रिकेट रंगशाला कमलको फूल आकारको हुनेछ । नेपाली मौलिकता झल्कने रंगशाला ३० हजार जना अट्ने क्षमताको हुनेछ ।
यस्तो बन्नेछ धुर्मुस सुन्तलीले बनाउने क्रिकेट रंगशाला
हेर्नुस् हाम्रो बिडम्वना ! सरकारले एउटा पनि खेल मैदान बनाउन सकेको छैन । त्यसैले यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सहयोग गर्न कोही पनि नछुटौं भन्न चाहन्छु । रंगशाला बन्दै गर्दा मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने हैन, यो देशको सम्पत्ति हो ।(अन्लाईनखबर )